Qaadashada Abaalmarinta Oscar-ka oo ah halka ay ku kobcaan jilayaasha iyo filimada-ba… – Hagaag.com
5 Agoosto 2020 in English // Virus keeps tourists from Africa’s great wildlife migration…
5 Agoosto 2020 in English // Islamic State jihadists on the run after Afghan prison raid…
5 Agoosto 2020 in National // Al-Shabaab ayaa dhowr jiho ka weerartay xerada Ciidamada ee deegaanka Dooynuunaay…
5 Agoosto 2020 in World // Dowlada Kenya ayaa faah faahin ka bixisay diyaarad shalay shil ku gashay degmada Dhoobley…
5 Agoosto 2020 in World // Masar ayaa isaga baxday wadahadallo lagu soo afjari lahaa muranka ka dhashay biyo xireenka…
Qaadashada Abaalmarinta Oscar-ka oo ah halka ay ku kobcaan jilayaasha iyo filimada-ba…
Posted on 6 Febraayo 2020 by Admin in fanka // 0 Comments
Dadka adduunka ku nool ayaa suga Febraayo walba, bixinta abaalmarinta Oscar-ka, maaddaama liis dheer oo filimo ah ay sugayaan xafladda abaalmarinta ee 92aad, oo loo qorsheeyay inay dhacdo 10-ka bishaan, si loogu soo bandhigo ku guuleystayaasha Akadeemiyada Farshaxanka iyo Sayniska ee Motion Pictures ama sawirada dhaqaaqa ee abaalmarinta.
Oscar-ka ayaa ah dhacdo ay u dhowraan jilayaasha iyo shirkadaha wax soo saara si aan caadi aheyn, iyadoo u dhiganta ku guuleysiga Oscar ay wax ku kordhineyso taariikh nololeedka jilaaga – iyo waxay ka dhigan tahay koror dhaqaale oo loogu talagalay jilayaasha iyo filimkaba.
In kasta oo ay adag tahay in la helo qiyaasta qiimaha ay jilaayaashu kasbadaan, hadana daraasado la sameeyay ayaa muujinaya in uu jiro wax loo yaqaan Oscar boom, kaas oo macnaheedu yahay faa’iidooyin dhow ayaa laga sameyn doonaa filimka iyo jilayaasha labadaba, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray wargeyska Ingiriiska ee The Independent. Laakiin sidee Abaalmarinta Oscar-ka u saameynayaa shaqada jilayaasha iyo filimada? Ama si sax ah, waa maxay qiimaha dhabta ah ee abaalmarinta tartanaka shaneemada adduunka ugu muhiimsan?
Sida ku xusan fahamka dhaqaale-yahan heysta shahaadada mastarka ee jaamacadda Colgate, Abaalmarinta Oscar ayaa u dhiganta kobcinta jilayaasha, waxayna matalaysaa koror 81% ah oo ah qiimaha lacagta ay qaadanayaan ka dib markii ay ku guuleysteen Abaalmarinta Oscar.
Wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday farqi weyn oo u dhaxeeya mushaharka ragga iyo dumarka. Jilaaga Mareykanka ah Jennifer Lawrence ayaa horay u gudbisay arrintan, maadaama qofka ay wada matalayaan jilid hal derajo ah hadana aanan helin kordhin muuqata ee mushaaraadka.
Xogta ayaa muujisay in mushaarka jilayaasha ay kor ugu kici karto 3.9 milyan oo doolar kadib markii mid ka mid ah uu helo abaalmarinta Oscar, halka ku guuleysiga abaalmarinta ay siin doonto aktarada kordhin mushaar qiimaheedu yahay kaliya $ 500,000.
About Admin (10897 Articles)
Virus keeps tourists from Africa’s great wildlife migration…
Islamic State jihadists on the run after Afghan prison raid…
Lebanese confront devastation after massive Beirut explosion…
Hooyo Soomaaliyeed ayaa shan caruur oo mataano ah ku umushay magaalada Mogadishu…
China will not accept U.S. ‘theft’ of TikTok: China Daily…